Abalandeli beHighlanders Badaniswa Yikudliwa Kwalo Kokuphela
Nkwenkwezi 04, 2015
Abusekho ubudlelwano obuhle phakathi kwabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kanye lomqeqetshi waleliqembu uBongani Mafu ngemva kokudliwa kwalo nge 1 ka nya litshaywa ngele Caps United ngeSonto.
Abalandeli beqembu leli baveze ukungasuthiseki kwabo ngokudliwa kwalo ngele Caps United ngokucula bekhuthaza umqeqetshi waleliqembu uBongani Mafu ukuba azwe isikhalazo sabo esokuba ahambe.
Lokhu akusikho kwakuqala ukuba abalandeli beBosso bacule bekhonona ngokudlala kweqembu labo kusizini yalonyaka njengoba langenyanga edluleyo beke bacula besola ukudliwa kwaleliqembu ngele Chapungu nge 1 ka nya khona njalo eMagumeni.
Okucaphula abalandeli beqembu le Highlanders yikuba ngemihla yomibili leliqembu linqotshwa lidlala lisekhaya belidlala lamaqembu abeqhuba nzima phambilini kokuzadlala leBosso.
Ele Chapungu belingazake linqobe lazovukela phezu kwe Highlanders kuthi ele Caps United lona seliphenduke inhlekisa ngokuhlala lisezindabeni ngoba libhekane lendubo zokuswela imali.
Kusenjalo iqembu le Chicken Inn litshengise ukuba lonyaka lizakhathaza ngemva kokubhaxabula elikwenze ele Dynamos nge 3 ka nya ngeSonto esigodlweni iHarare.
Limpumela itshiye iqembu le Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lilemiklomelo elitshumi lathoba minwe mbili ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa.
Kundawo yesibili kuhlezi iqembu le Triangle lona elilemiklomelo elitshumi lesithupha kuthi iqembu le Dynamos lisendaweni yesithathu lilemiklomelo elitshumi lane.
Iqembu le How Mine lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngemva kwalo kuleqembu le Caps United elilemiklomelo elitshumi lanye.
Kundawo yesithupha kuhlezi iqembu le ZPC Kariba elilemiklomelo elitshumi okulinani eliphethwe liqembu le Highlanders lona elihlezi kundawo yesikhombisa.
Iqembu le Harare City lihlezi kundawo yethoba minwe mbili lilemiklomelo eyithoba munwe munye njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi ngaphansi kwalo ele Chapungu.
Kundawo yetshumi kuleqembu le Tsholotsho lona elilemiklomelo eyithoba minwe mbili lona lilandelwa liqembu le FC Platinum elilemiklomelo eyisikhombisa.
Iqembu le Flame Lily yilo elihlezi kundawo yetshumi lambili lilemiklomelo eyisithupha kuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amathathu alemiklomelo emihlanu njalo la ngathi ele Hwange, ele Buffaloes kanye lele Whawha.
Iqembu elijeke amanye wonke ngele Dongo Swamills elilemiklomelo emithathu.
Sikhangele isimo somdlalo wenguqu kwamanye amazwe;
NgaseNgilandi iqembu le Chelsea yilo eselithethe isicoco seligi ngemva kwemidlalo ebikhona ngempelaviki njengoba selibuthelele imiklomelo engamatshumi ayithoba minwe mbili lantathu okulinani elingeke lifikiswe ngamanye amaqembu ebelincintisana lawo.
Lokhu ngokwesithathu ukuba umqeqetshi weqembu le Chelsea uJose Mourinho akhokhele leliqembu lifinyelele ekubeni zintshantshu zeligi kwele Ngilandi kodwa useke waphakamisa njalo isicoco seligi emazweni athi ele Portugal, ele Italy kanye lase Spain.
Elizweni le Spain umbango uqhubekela phakathi kweqembu le Barcelona lele Real Madrid ngemva kokuba womabili ephumelele kumidlalo yawo ngempela viki edluleyo.
Iqembu le Barcelona liyalele phezu kwengalane lilemiklomelo engamatshumi ayithoba minwe mbili lesikhombisa ngemva kokubhaxabula elikwenze ele Cordoba nge 8 ka nya kuthi ele Real Madrid lona lilemiklomelo engamatshumi ayithoba minwe mbili lanhlanu ngemva kokutshaya ele Sevilla nge 3 ka 2.
Umdlali weqembu le Zimbabwe Republic Police uTrust Chidomaya nguye onqobe kumncintiswano walonyaka owe Coca Cola 4 Minute Mile oqhutshelwe ko Bulawayo endaweni ye Zimbabwe International Trade Fair ngoMgqibelo.
UChidomaya uthole umvuzo wamadola angamakhulu ayithoba minwe mbili ngemva kokunqoba kwakhe abanye abadlali abalitshumi lesikhombisa abencintisana labo.
Oqede ekundawo yesibili ngomunye njalo umdlali osuka kuqembu lama pholisa uCephas Pasipamire ikanti obekundawo yesithathu ngu Jonathan Chinyoka ogijimela iqembu le Zimbabwe Prisons and Correctional Services.